System nokwenza – Isigaba – Windows – Vessoft
System nokwenza – Windows
System nokwenza Antiviruses Ithuluzi ukucinga bese ukhipha amamojula adware. Isofthiwe aqalaze system yakho nangempumelelo ususa wamathuluzi, amayunithi kanye nekwandzisa okungadingekile.
Advanced SystemCare 10.1.0.692 Standard futhi 10.0.1.82 Ultimate
English, Українська, Français, Español... Glary Utilities 5.68 Standard futhi Pro
System nokwenza Antiviruses Ithuluzi Onamandla ukuthola izinsongo ezifihliwe futhi asuse spyware enonya. The Umbuso isebenzisa ubuchwepheshe ifu ukuvikela ngesikhathi sangempela.
System nokwenza Ubuso bekhompyutha Isofthiwe nokwandisa kanye nokusebenza Tuning of the system. Isofthiwe iqukethe amathuluzi anhlobonhlobo oyifisayo of the system futhi ushintshe izilungiselelo zokuphepha.
Wise Care 365 4.5.1.423 Standard futhi Portable
English, Español, Português, العربية... Wise Registry Cleaner 9.36 Standard futhi Portable
System nokwenza Ithuluzi nokwandisa futhi ukwandisa ukusebenza ohlelweni. Isofthiwe ngokuzenzakalelayo ucinga izinkinga uhlelo bese ivumela ukulungisa amaphutha.
English, Українська, Français, Español... Windows Repair 3.9.23 Standard futhi Portable
System nokwenza The instrument ukuvula amafayela ukuthi ikhiyiwe ngu izinqubo uhlelo. It isekela ukuqedwa uhlelo amaphutha ehlukahlukene ngesikhathi emsebenzini amafayela.
System nokwenza Testing Ithuluzi ukubona futhi silungise amaphutha ohlelweni. Isofthiwe kwenza ukuthumela imibuzo incazelo eningiliziwe yephutha ohlelweni bese skrini Onjiniyela isithangami.
System nokwenza Ithuluzi ukwandisa ukuzinza kanye nesivinini of the system. Uhlelo yenziwa izichibiyelo bese sikhipha amaphutha, entries angenalutho noma kungathí shu kumbhalisi.